Mogadishu Journal » PSG ayaa wici doonta Mbappe ka hor kulanka Lyon
Kylian Mbappe ayaa wali ciyaari kara kulanka Lyon ee axada isagoo durba ku soo laabtay tababarka Paris Saint-Germain kadib dhaawicii soo gaaray bartamihii isbuuca.
Isagoo abuuray goolkii PSG barbaro 1-1 ah oo ay la galeen Club Brugge, Mbappe ayaa Arbacadii dhaawac uga baxay canqowga.
Shaqo-ka-joojin kasta waxay u noqon lahayd dharbaaxo Mauricio Pochettino, oo leh shan kulan ka hor fasaxa caalamiga ah ee Oktoobar-laga bilaabo Lyon oo ay ku jirto kulanka Champions League ee Manchester City.
Mbappe ayaa ku lug lahaa 7 gool tartamada oo dhan ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan-waana kan ugu badan ciyaaryahan kasta oo PSG ah iyo lixaad wadaaga shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa sidoo kale rikoor fiican ka heysta kulamada Lyon, iyadoo sideedii gool ee uu ka dhaliyay Ligue 1 uu ka badan yahay koox kasta oo hadda ku jirta qeybta.
Laakiin Mbappe ayaa wali sii wanaajin kara tiradaas Axadda, iyadoo PSG ay soo warinayso "horumar wanaagsan" dhaawiciisa Sabtidii.
Pochettino ayaana ku daray shirkiisa jaraa'id: "Kylian saaka ayuu tababar la qaatay kooxda. Waan arki doonaa sida uu yahay berri subax si aan u aragno inuu ka tirsan yahay kooxda iyo in kale."
Iyada oo waqtigan xasaasiga ah ee ololuhu uusan gacan ka geysanayn fasax caalami ah oo xamaasad badan oo ciyaartoydiisa ah, Pochettino wuxuu yiri PSG "waxay isku dayi doontaa inay adeegsato ciyaartoydeena oo dhan iyadoo garaacaysa dheelitirka saxda ah".
Taasi waxay la macno noqon kartaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Nuno Mendes, laakiin tababaraha PSG weli ma hayo "taariikh ama xog gaar ah" oo ku saabsan soo laabashada Sergio Ramos ee taam ahaanshihiisa.
Dhanka kale, Lionel Messi ayaa lagu wadaa inuu qaansada gurigiisa.
“Leo wuu deggan yahay,” ayuu yiri Pochettino. “Wuu ogyahay inuu kulankiisa ugu horreeya ku hor ciyaari karo taageerayaashiisa.
“Kooxdu waxay diirada saareysaa ciyaarta iyo hagaajinta qaab ciyaareedkeena Champions League iyo ku guuleysiga ciyaarta dabcan”.
Mbappe, Messi iyo Neymar ayaa markii ugu horreysay ku soo wada bilowday Brugge, laakiin midkoodna ma jirin shabaqa, iyadoo Argentina ay si weyn u sugeysay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee PSG.
“Ciyaartoydu waxay u baahan yihiin waqti, si ay isu ogaadaan, si ay u helaan isfaham,” ayuu raaciyay Pochettino. “Waxay ku dhici doontaa waqti kadib, waxaan haysanaa koox tayo leh”.
Dad badan ayaa la filan doonaa isbuucaan, iyadoo Lyon ay 1-0 kaga badisay Parc des Princes bishii December ee lasoo dhaafay guushoodii ugu horreysay 13 kulan oo horyaalka ah oo ay booqatay.